नायिका श्वेता खड्काको आज जन्मदिन, कति वर्ष लागिन् त ? – " सुलभ खबर "
नायिका श्वेता खड्काको आज जन्मदिन, कति वर्ष लागिन् त ?
काठमाडौं । नायिका श्वेता खड्काको आज जन्मदिन । १९८९ फेब्रुअरी ५ तारिखका दिन उनको जन्म काभ्रेको पनौतीमा भएको हो । यस आधारमा आज उनी ३२औं जन्मदिन मनाउँदैछिन् ।
श्वेताले १२ वर्षअघि मोडलिङ हुँदै फिल्मी क्यारियर सुरु गरेकी हुन् । सन् २०१० मा रिलिज भएको चलचित्र ‘कहाँ भेटिएला’ उनको डेब्यु चलचित्र हो । एउटै चलचित्रबाट स्थापित हुने थोरै नायिकामा श्वेता पनि पर्छिन् ।
त्यसपछि उनले हाँसी देउन एक फेर, श्रीमान् श्रीमती, कोहिनूर र कान्छी चलचित्रमा अभिनय गरिन् । कहाँ भेटिएला, कोहिनूर र कान्छी उनले आफैंले निर्माण गरेको चलचित्र हो । कहाँ भेटिएला खेल्नेक्रममा उनको अभिनेता श्रीकृष्ण श्रेष्ठसँग प्रेम सम्बन्ध बस्यो । त्यसपछि दुवैले आफ्नो प्रेमलाई विवाहमा परिणत गरे । बिहेपछि श्रीकृष्ण र श्वेता ६ महिना पनि सँगै बस्न पाएनन् । सन् २०१४ मा क्यान्सरका कारण श्रीकृष्णको निधन भयो ।
श्रीकृष्णको निधनपछि दुई वर्ष नेपाली चलचित्र उद्योगबाट अलग्गिएकी श्वेता फेरि अभिनय र निर्माणमा लागिन् । आकाश अधिकारीसँग मिलेर कान्छी चलचित्र खेलिन् । अहिले उनी सिन्धुपाल्चोकको माझीबस्तीमा एकीकृत घर निर्माण गरेर हस्तान्तरण गर्ने कार्यमा लागेकी छन् ।
तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका–३ किल्चोकस्थित निकै पुरानो धार्मिक स्थल अकलादेवी मन्दिरलाई उजिल्याउन स्थानीयवासी जुटेका छन् ।
बुटवलका मन्दिर, प्रहरी चौकीको प्रतिक्षालय, ट्राफिक चोक, चौराह । कुनै बेला यतै भेटिन्थिन् उनी ।
नायिका पुजाकालागी पल लक्की, आकाश प्रेमी
काठमाण्डौ । लकडाउन चलिरहंदा चर्चामा रहेका छन् कलाकार पुजा शर्मा, पल शाह र आकाश श्रेष्ठ
पल शाह र वर्षा राउतको अर्को धमाकेदार गीत ‘मेरी सोल्टीनी’को भिडियो बाहिरियो
काठमाडौं । गीतकार तथा संगीतकार बाल कृष्ण न्यौपानेको नयाँ गीत मेरी सोल्टीनीको भिडियो सार्वजनिक भए
अनिल कपुरले किन राखे जुगाँ, रोचक किस्सा
एजेन्सी । बलिउड अभिनेता अनिल कपुरले एक कार्यक्रममा आफ्नो जुगाँ राख्नुको रहस्य खुलाएका थिए ।